စိုပြေလန်းဆန်းလာတဲ့ လွှတ်တော် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » စိုပြေလန်းဆန်းလာတဲ့ လွှတ်တော်
Posted by student on May 2, 2012 in Copy/Paste | 10 comments
ရွှေအိုရောင် ကျွန်းသားထိုင်ခုံတွေ စားပွဲတွေ ချထားတဲ့ ခန်းမကြီး တခုထဲမှာ လူရာပေါင်းများစွာ ထိုင်နေကြပေမယ့် အပ်ကျသံမျှ မကြားရလောက်အောင် တိတ်ဆိတ်လွန်းလှတယ်။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတွေ ရာပေါင်းများစွာ ရှိနေပြီး အမျိုးသားတွေက ခေါင်းပေါင်း၊ တိုက်ပုံ၊ ပုဆိုး မြန်မာဆန်ဆန် ၀တ်ဆင်ထားကြသလို အမျိုးသမီးတွေကလည်း မြန်မာဆန်ဆန် ရင်ဖုံးနဲ့ ထဘီတွေ ၀တ်ဆင်ထားကြတယ်။
အစိမ်းရောင် ယူနီဖောင်းဝတ် အမျိုးသား မြောက်မြားစွာကလည်း ခန်းမကျယ်ကြီးထဲမှာ ငြိမ်သက်စွာ ရှိနေကြတယ်။ ခန်းမကျယ်ကြီး အလယ်ခေါင်မှာ ခရမ်းရောင် ရင်ဖုံးအကျီနဲ့ ချည်ထည် ထဘီ၊ အဖြူနဲ့ ခရမ်း ရောယှက်ထားတဲ့ ဒေါင်းမြီးပုဝါ လွှမ်းခြုံဝင်ထားတဲ့ အမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦး ရှိနေပြီး အမျိုးသမီးကြီးရဲ့ ခေါင်းမှာပန်ထားတဲ့ အဖြူရောင်နှင်းဆီပန်းတွေက ဝေဆာလွန်းလှတယ်။ အမျိုးသမီးကြီးကို လူတွေမြောက်မြားစွာ မကြာခဏ ဆိုသလို လာရောက် နှုတ်ဆက်ကြတယ်။
ခန်းမကျယ်ကြီး ၀င်တဲ့ ၀င်ပေါက်ရှေ့မှာတော့ လူစုလူဝေးကြီးတခု ရှိနေပြီး လူတွေက အချင်းချင်း တိုးဝှေ့နေကြတယ်။ သူတို့အားလုံးရဲ့ လက်ထဲက ကင်မရာတွေဟာ ခရမ်းရောင်ဝတ် အမျိုးသမီးဘက်ကို ချိန်ရွယ် ရိုက်ကူးနေကြတယ်။
အဲဒီအမျိုးသမီးက ကမ္ဘာ့ပြည်သူတွေသာမက၊ မြန်မာပြည်သူတွေ မြောက်မြားစွာ လေးစား တန်ဖိုးထားချစ်ခင် ကြတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါပဲ။
ခန်းမအပြင်မှာ ရှိနေတဲ့ လူစုလူဝေးကတော့ ကော့မှူးမြို့နယ် ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်ခံထားရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြည်သူ့ လွှတ်တော်မှာ ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုပြီး ပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အစည်းအဝေး တက်တာဖြစ်လို့ နေပြည်တော် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေး ခန်းမကျယ်ကြီး အထိ လာရောက် သတင်းရယူနေကြတဲ့ ပြည်တွင်းပြည်ပ သတင်းထောက်တွေဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ခန်းမကျယ်ကြီးထဲမှာ စစ်တပ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ နိုင်ငံရေးပါတီအစုံက ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခံထားရတဲ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေ အမတ်တွေ ရာပေါင်းများစွာ ရှိနေကြပါတယ်။
မနက် ၁၀ နာရီတိတိမှာတော့ ရွှေအိုရောင်နဲ့ အမည်းရောင် ရောယှက်ထားတဲ့ ၀တ်စုံပွပွကြီးကို ၀တ်ဆင်ထားတဲ့ အမျိုးသားကြီးတစ်ဦး ခန်းမကျယ်ထဲကို ၀င်ရောက်လာတယ် ဆိုရင်ပဲ ထိုင်နေတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အားလုံးက ညီညီညာညာ မတ်တပ်ရပ်လိုက်တယ်။ သူကတော့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းဖြစ်ပြီး သူ့မျက်နှာမှာ အပြုံးရိပ်တချို့သမ်းနေတယ်။
လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေ ပုံမှန်တက်ရောက် သတင်းယူနေတဲ့ ပြည်တွင်းသတင်းထောက်တဦးကလည်း “ဒီနေ့တော့ ဦးရွှေမန်းကြည့်ရတာ ကျေနပ်နေတဲ့ပုံပဲ။ ခပ်ပြုံးပြုံးလေးပဲ။ ပုံမှန်ဆိုရင် သူက ခပ်တည်တည်မျက်နှာပေးရှိတယ်” လို့ မှတ်ချက်ပြုတယ်။
ဒါပေမဲ့ လွှတ်တော်ထဲမှာ လူတိုင်းပြုံးနေကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ ယူနီဖောင်းဝတ် စစ်သား ကိုယ်စားလှယ်တွေ အများစုရဲ့ မျက်နှာက မပြုံး မရယ် ခပ်တည်တည် မျက်နှာထားတွေနဲ့ ရှိနေကြတယ်။ တချို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ မျက်နှာတွေကတော့ ညှိုးငယ်နေပါတယ်။
မနက် ၁၀ နာရီ ငါးမိနစ်ဝန်းကျင်မှာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ကျမ်းကျိန်ကြဖို့ ဆင့်ခေါ်ပါတယ်။
စစ်သားကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ အနီးဆုံးမှာရှိနေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တပ်ကိုယ်စားလှယ်တွေကြားကနေပြီး အရောင် တောက်နေတဲ့ မျက်ဝန်းတွေ၊ အားမာန် အပြည့်ရှိတဲ့ ခြေလှမ်းတွေ တလှမ်းချင်း ခန်းမရှေ့ကို ထွက်လာတယ်။ စစ်သားကိုယ်စားလှယ်တွေအများစုက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အထူးအဆန်းတခုအလား စူးစမ်း ကြည့်နေကြတယ်။
အဲဒီနောက်မှာတော့ သူရဦးရွှေမန်း ရွတ်ဆိုပြတဲ့ အတိုင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် NLD လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၃၁ ဦး နောက်က ရွတ်ဆို ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုပါတယ်။
“ကျွန်ုပ်သည် ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံရပြီးဖြစ်သဖြင့် နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ထိန်းသိမ်း ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ပြီး နိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေများကိုလည်း လိုက်နာပါမည်။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားများအပေါ် သစ္စာ စောင့်သိ ရိုသေပါမည်။ ပြည်ထောင်စု မပြိုကွဲရေး၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်မှု မပြိုကွဲရေး၊ အချုပ်အခြာအာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးတို့ကို ထာဝရစဉ် ဦးထိပ်ပန်ဆင် ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ထို့ပြင် ယခု ကျွန်ုပ်ထမ်းဆောင်မည်ဖြစ်သော တာဝန်၊ ၀တ္တရားများကို ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်စွာ ဆောင်ရွက်မည်ဟု လေးနက် တည်ကြည်စွာ ကတိသစ္စာပြုပါသည်” ဆိုတဲ့ စုပေါင်း ညီညာတဲ့အသံက လွှတ်တော် ခန်းမကျယ်ကြီးထဲမှာ ဟိန်းထွက်နေတယ်။
ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုနေချိန်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မျက်ဝန်းတွေက စူးလှလွန်းပြီး သူရဲ့မျက်နှာက သာမန်အချိန်အထက် ခက်ထန်နေသလိုပါပဲ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ သွင်ပြင်က ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ် စောင့်ရှောက်ပါမည် ဆိုတဲ့ စကားရပ်ကို ပြင်ဆင်ဖို့ ကြိုးစားရင်းက အဆင်မပြေလို့ အလျှော့ ပေးလိုက်ရပေမယ့် အဲဒီစာသားကို ပြင်နိုင်ရမယ်လို့ ယုံကြည်ချက် ရှိနေပုံပါပဲ။
ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုအပြီးမှာ တောက်ပတဲ့ မျက်ဝန်းတွေနဲ့ သူရဦးရွှေမန်းကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူရဦးရွှေမန်းကတော့ သူရဲ့စားပွဲပေါ်က စာရွက်ကိုသာ ငုံ့ကြည့်ရင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြန်မကြည့်ဖြစ်ပါဘူး။
အဲဒီနောက် သူရဦးရွှေမန်းက ခွင့်တိုင် ပျက်ကွက်တဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် စာရင်းတွေနဲ့ အတည်ပြုဖို့ ကျန်တဲ့ ဥပဒေအချို့ကို ဖတ်ပြပြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ သဘောတူညီချက် ရယူပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတက်ရင်း လွှတ်တော်ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို စူးစမ်းနေပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နောက်တန်းမှာ ထိုင်နေတဲ့ စစ်သားကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့ မျက်နှာတွေ အောက်ငုံ့လို့ စားပွဲပေါ်က စာရွက်တွေ ဖတ်ရှုရင်း တကယ် အလုပ်ရှုပ်နေတာလား၊ အလုပ်ရှုပ်ချင်ယောင် ဆောင်နေတာလား ဆိုတာ ကွဲကွဲပြားပြား မသိဘူးလို့ သတင်းထောက်အချို့က ဆိုပါတယ်။
မနက် ၁၀ နာရီ ၃၅ မိနစ်မှာ လွှတ်တော်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးကြောင်း ကြေညာလိုက်ချိန်မှာတော့ သတင်းထောက်တွေ မြောက်မြားစွာ လွှတ်တော်ထဲကို ပြေးဝင်သွားကြတယ်။ တချို့အမတ်တွေကို သတင်းထောက်တွေက ၀င်တိုက်မိကြတယ်။
ဗိုလ်မှူးချုပ်နဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်ရှိတဲ့ စစ်သား ကိုယ်စားလှယ်အရာရှိကြီးတွေက တော့ သတင်းထောက်တွေကို လက်ကာပြပြီး တစုံတရာ မှတ်ချက်မပေးဘဲ ရှောင်ပြေးနေကြတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လွှတ်တော်ကို သူလာတက်တာက ပြည်သူတွေအတွက်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်သူတွေအတွက် အလုပ်လုပ်ရင်း ကြိုးစားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း၊ လွှတ်တော်ပြင်ပ နိုင်ငံရေးကိုလည်း ဆက်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း ပြောဆိုပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွှတ်တော်ခန်းမကနေ ပြင်ပကို ထွက်ရာ လမ်းတလျှောက် ပြည်တွင်းပြည်ပ သတင်းထောက်တွေ ကြိတ်ကြိတ်တိုး တိုးဝှေ့နေကြတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လှမ်းတဲ့ ခြေလှမ်းတိုင်း၊ ပြောတဲ့ စကားလုံးတိုင်းမှာ အနာဂတ်အတွက် ယုံကြည်ချက်တွေ အပြည့် ရှိနေပုံပါပဲ။
လွှတ်တော်ဝန်ထမ်းတဦးကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရောက်လာတဲ့ ဒီနေ့ဟာ ခြောက်ကပ်နေတဲ့ လွှတ်တော်အတွက် အစည်ကားဆုံးနေ့တနေ့လို့ ဆိုတယ်။ သူတို့အားလုံးကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အဝေးက လှမ်းမျှော်ကြည့်နေကြတယ်။ နှုတ်ဆက်ပြောဆိုခွင့် တားဆီးခံထားရပုံပါပဲ။
ကြံ့ခိုင်ရေးလွှတ်တော်အမတ်တွေ အများစုက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ၀ိုင်းအုံနေတဲ့ သတင်းထောက်တွေကို ကြည့်ပြီး ငေးမောနေကြတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သတင်းထောက်တွေမေးသမျှကို အပြုံးလေးနဲ့ ပြန်လည် ဖြေကြားနေတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွှတ်တော်ကနေ ကားနဲ့ ပြန်လည် ထွက်ခွာသွားတာကို ကြံ့ခိုင်ရေး အမတ်တချို့ မျက်စိတဆုံး ငြိမ်ငြိမ်သက်သက် လှမ်းမျှော်ကြည့်နေကြပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ပထမဆုံး လွှတ်တော်တက်တဲ့ နေ့ကတော့ အားမာန်အပြည့် တက်ကြွ ယုံကြည်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ နေ့တနေ့လို့ ဆိုရပါမယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်ပြီဆိုတဲ့ သတင်းကို ဖတ်ရတဲ့ အတွက် ဝမ်းမြောက်မိပါ၏။ လက်တစ်ချောင်းထောင် အားပေးခဲ့ပါသည် ။
နောက်တလ.. တနှစ် စသဖြင့်.. ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လည်း…vision ကိုရေးကြည့်ပါလား..
နောင်တလအကြာမှာ ရက်၃၀ သို့မဟုတ် ၃၁ရက် အချိန်ကုန်သွားမယ်လေ၊ နောင်တနှစ်ဆိုရင်ဒေါ့ ၃၆၅ရက်ပေါ့ သဂျီးရယ်..။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ရက်ကိုလစား လဂိုနှစ်စား တနှစ်ပြီးတနှစ် အချိန်ကုန် မဆလဂနေ နဝတဖြစ်၊ နဝတဂနေ နအဖဖြစ်၊ နအဖဂနေ ကြံ့ဖွတ်အစိုးရဖြစ်… လွတ်လပ်မှုအသီးအပွင့်အဖြစ် တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း ခြံအမှတ်၅၄ဂျီးလည်း ဒီမိုကရေစီရ… ဩော် အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ..။
သူကြီး ကြားချင်မယ် ထင်တာ ပြောပါမည်။
အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်မှ (သို့) တစ်ချို့ မှ အမှန်တကယ်ပင် ပြည်သူ ကို စေတနာ ထားပြကြည့်ပါ။
အဲဒီလို အချိန်မှာ သူဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထက်ပိုပြီး နာမည်ရလာပါမယ်။
လူဆိုတာ အသစ်တွေကို ပိုစိတ်ဝင်စားတတ်တာမျိုး မို့လား?
ဥပမာ – TIME ရဲ့ The 100 Most Influential People in the World မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မပါဘဲ ဦးသိန်းစိန် ပါလာသလိုပေါ့။
ပြောရရင် ကတော့ ပြည်သူတွေ အတွက် ဘယ်သူ တွေ အလုပ်လုပ်ပေးနေသလဲ ဆိုတာပေါ် မူတည်ပြီး နာမည် ဖြစ်လာတော့မှာပါ။
ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ မြန်မာပြည် ဖြစ်နေလို့ပါဘဲ။
(ဦး)အံ့ကျော် တစ်ချိန်လုံး လူကြမ်း လုပ်လာရာက နေ အသုံးလုံး ရုပ်ရှင် “ဘယ်သူပြိုင်လို့ လှပါတော့နိုင်” မှာ သနားစရာ ဖြစ်ပြီး လူတွေ ဝိုင်းချစ်လိုက်ကြတာ။
အမှန်အကန် သရုပ်ဆောင်ဖို့တော့ လိုတာပေါ့ရှင်။ ;-)
ဒါကတော့ “ဆိုက်ကို” ပွိုင့်အောဖ်ဗျူး ဘက်က ဝင် ရွှီးကြည့်တာ။
မြန်မာအက်တစ်ဗစ်(activist)တ်ာတော်များများကတော့.. “ဆိုင်ကို” ဘယ်တော့မှမသုံး..
TIME ရဲ့ The 100 Most Influential People in the World မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါပါတယ်နော..
သူကြီး – ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က Final List မှာ မပါတော့ဘူး။
ဦးသိန်းစိန် က ၆၇ နဲ့ ပါတယ်။
ဒေါ်စုမပါတာ.. သိတောင်မသိလိုက်ဖူး.။ သေချာပေါက်လို့တွက်ထားတာ.. :?
ဦးသိန်းစိန်အကြောင်းကို.. ဦးသန့်ရဲ့မြေး ဦးသန့်မြင့်ဦးကရေးပေးထားတယ်..။
အရှေ့ကို ဆက်လျှောက်ပါလို့.. အနောက်ကိုတဲ့.. လှည့်မကြည့်ကြေး…။
By Thant Myint-U Wednesday, Apr. 18, 2012
Since he took officealittle more thanayear ago, the President of Burma, U Thein Sein, has proved himself the architect of one of the most unlikely democratic transitions anywhere in the world.
It’s been an amazing balancing act. He’s had to keep on board the ex-generals who still dominate government, as well as army chiefs, top businessmen, the opposition parties — including the largest, led by Nobel laureate Daw Aung San Suu Kyi — andayoung and dynamic civil society.
U Thein Sein, 67, is trying to performatriple act of moving toward democratic government, overhauling one of the world’s most backward economies and negotiating an end to overadozen long-standing ethnic conflicts, all while the country remains under punishing sanctions.
Burma was until just recentlyabyword for almost every early 21st century ill. But if U Thein Sein gets his way, it may soon becomeamodel for peaceful democratic change.
Thant Myint-U isaBurmese historian and author
Read more: http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2111975_2111976_2112089,00.html #ixzz1tlw6ZTdl
အော်…. မနေ့က မြန်မာ့အသံမှာ လွှတ်တော်သတင်းကြည့်ရတာလဲ
လူရွှင်တော်တွေ သီချင်းဆိုဖို့တစ်ယောက်ယောက်က အနောက်ဆာ လုပ်ပြနေသလိုပါပဲ…..
သည်နိုင်ငံကောင်းအောင်၊ တစ်ကယ်လုပ်နိုင်မည့်၊ပြောင်းလဲနိုင်မည့် နိုင်ငံရေးကားလ်ချားသည်၊ လက်ရှိအစိုးရနှင့်အာဏာရအဖွဲ့ပေါ်မှာအများကြီးမူတည်ပါသည်၊ သည်လိုပြောင်းနိုင်ဘို့ကို အန်အယ်လ်ဒီနှင့်
အတိုက်အခံများပိုမိုလိမ္မာ၊ကျွမ်းကျင်ဘို့အရေးကြီးပါသည်။ တိုက်ဘို့မဟုတ်— တွဲခေါ်ဘို့ပါ။ဟီးရိုးလုပ်ဘို့